श्रीमती परपुरुषसंग रं’गेहात भेटेपछि आफ्नो ६ वर्षीय छोरा सहित मिडियामा आए सन्तोष ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 6, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमती परपुरुषसंग रं’गेहात भेटेपछि आफ्नो ६ वर्षीय छोरा सहित मिडियामा आए सन्तोष ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
छोरालाई समेत छोडेर श्रीमती अर्कै पुरुषसंग हिडेको थाहा पाएपछि सन्तोष नेपाल आउछन । नभन्दै उनले गत तिन महिना देखि नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका ४ का सन्तोष सदा संखरसंग एकै कोठामा बस्दै आएको फेला पार्छन । विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहेका मनिषा जस्तै संखर पनि विवाहित नै हुन्। आफु अन्यायमा परेको भन्दै सन्तोषले मिडिया र प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई कोठा मै रंगेहात पक्रन्छन । संखर र मनिषाले आफ्नो गल्ति स्विकार्छन ।
यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएका महिला पुरुषहरु धेरैको सम्बन्ध बिग्रेको समाजमा देख्न सकिन्छ । यस्ता घटनाहरुबाट पाठ सिकेर पारिवारिक कलहलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सोचनीय हुन्छ । प्रहरीको रोहबरमा श्रीमती पिडित सन्तोष पुग्दा परपुरुषसंग बसिरहेको श्रीमती मनिषाको कोठामा यसरी रंगेहात पक्राउ परेकी थिइन ।
यसै बीच सन्तोष र मनिषाको ६ वर्षीय छोरा सुप्रिम सुनार पनि मिडियामा आएका छन । आमा बाबाको सम्बन्ध बिग्रिएपछि सबै भन्दा पिडा तिनै छोरालाइ परेको छ । बालकलाई आमा र बुबा बीच रोज्न लगाउदा उनले बुबालाई रोजेका छन । बालकै अवस्थामा आमा बाबाको माया नपाउदा उनलाई कति पिडा छ उनको मुहारमा स्पष्ट देखिन्छ । भिडियो यहाबाट हेर्न सकिन्छ ।
शिवलिंगको पूजा किन गरिन्छ ? यस्तो छ कारण……